Converters Mp3 sameeyo qayb weyn oo ka mid ah adduunka casriga ah ee maanta. Ka dib waa sharaxaad gaaban oo dhan mp3 video converters in ka dhigi lahaa waa u fududahay user inay go'aan ka. Liiska ayaa la isku daro si taxadar leh in wax alla doorashada user waa weli rakibo ugu xirfad la sameeyo. Liiska ayaa loogu talo galay ilaalinta ee aragtida baahida iyo dalabaadka fasalka kasta user.
Part1: Top 5 free mp3 converters video software for Windows 10
Part2: Top 5 free mp3 converters video software u Mac
Part3: Top 5 mp3 online free video converters
Part4: Top 5 free mp3 video Converter barnaamijyadooda android
Windows 10 waa Intaa waxaa dheer ugu danbeeyay ee qoyska Microsoft oo waa mid nooc ah barnaamij ka maamushaa xogta ee user. Waayo, kanu OS liiska faahfaahsan converters Mp3 waa sida hoos. Liiskaan ayaa u hogaansamay kadib markii baadi internetka ayaa si faahfaahsan u weyn si ay fursado badan waxaa lagu soo bandhigay samaynta doorashada u fududahay user. Laga soo bilaabo hore ilaa ugu danbeysay ee ay fursadaha lagu cabiran si heerka tayo isku mid ah oo dhan.
Barnaamijka dhalato 1. Fair Isticmaal WM
Files freeware Iskudarka
• interface ee barnaamijka waa u fududahay in la fahmo iyo in la isticmaalo si user in marna laga qaxay halka habka a la gar qaybshay.
• Waxaa jira dhowr Casharrada online in uu oggolaan in dadka isticmaala ay u noqon oo waafaqsan shuruudaha barnaamijka marka ay timaado waxa ay ka hawlgala.
• laawe A ama user Waa inuusan isticmaali kartaa barnaamijka heshiis weyn kartida iyo hufnaanta si wixii kaloo la sameeyo.
Taageerayaan iyo wixii soo baxayey qaabab
Qof kasta wuxuu u soo bixi kartaa
Muuqaaladan guud ahaan iyo farsamo ee barnaamijka waxa lagu soo bandhigay qaab weyn iyo fasalka keentay user dhinaca jihada saxda ah ee la xidhiidha isticmaalka barnaamijka oo ay ka shaqeynayaan guud.
2. qalab Daemon Lite
• Natiijada iyo sifooyinka guud ahaan in ay yihiin gundhig gudahood barnaamijka sameeyo qayb weyn ka ah software dooda.
• Cabbirka barnaamijka waa qaadasho yar oo aalladda waa ku ool ah oo wax ku ool ah.
Dib u eegis ayaa lagu posted by website "dunida PC".
out of 5 ayaa loo oggolaaday in ay software si user helo waxa loo baahan yahay.
3. CD gubi Pro
CD gubi shirkad pro
• Waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu weyn in la hubiyo in user helo shaqada lagu sameeyey goobtii.
• Muuqaaladan guud ee barnaamijka aad si fudud u isticmaalaan si user in ay marna ka goostay.
Dib u eegista software gubanaya CD
Dib u eegista ayaa soo jeedisay in user helo natiijada ugu sareeya iyo hordhaca ah ee guud ee barnaamijka waxaa sidoo kale la siiyey. Dib u eegista waxa uu dhigayaa "waayo-aragnimo A hufan la style weyn".
4. yaanay 2.0 dhisay
• Barnaamijka ayaa sheegay sida laga cabsado maadaama ay ka dhigaysa nidaamka diinta guud ahaan mid aad u fudud.
• horumarinta barnaamijka waa gobol ka mid ah tahay oo leh waxyaabo fudud iyo farsamooyinka ugu dambeeya.
Dib u eegista posted waa sida soo socota
CNET waxa uu dhigayaa "gabgab leeyihiin ayaa dhisi 2.0 ayaa la soo saaray hayo in aragtida nabadaynta user oo aan wax arrin oo dhib si nidaamka la raaco flawlessly".
5. K ahee Lite Converter Pack
K - shirkad yar.
• Barnaamijka waxaa si dhab ah codec software gundhig in laga yaabo inuu waayo-aragnimo diinta fudud.
• Waa fududahay in la isticmaalo iyo shaqeeyaan sameynta nidaamka diinta aad u fudud yihiin in la raaco.
Bogga internetka waxay caan ku tahay shaqada ay qabato. Dib u eegista waxa uu dhigayaa "Mid ka mid ah converters ugu fiican in dhameystiray nidaamka buuxda oo ka dhigaysa user a ku faraxsan in ay sameeyaan isku beddelka ah si fudud".
Ka dib waxaa liiska ay tahay in la tixgeliyo:
1. studio gubashadii AShampoo free
• Maxaa yeelay, dhammaan dadka isticmaala Mac barnaamijkan waa boon ah kaasoo samayn lahaa trick ee caadadii adkayd.
• Barnaamijku waa user saaxiibtinimo la gui gundhig taas oo kordhinaysa waxtarka hawl.
Website waxa uu dhigayaa in "software waa wax fiican, laakiin waxaa la horumariyo meel dhexaad ah, weli waxaa jiraan fan dhammaan hawlaha qasab looga baahan yahay".
2. Media Coder
Coder HQ Media.
• Waa mid ka mid ah barnaamijyada in la kulmo baahida dadka isticmaala si ay u nabadeeyaan.
• Waxaa laga yaabaa inuu badalo qaab kasta oo kale oo kasta si taageero waa mid aad u ballaaran.
Bogga internetka ayaa amaanay barnaamijka isagoo sheegay in "Waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu waxtarka badan ee jeer oo dhan".
3. Win amp buuxa
• Barnaamijku wuxuu siiyaa waayo-aragnimo ah oo hufan si loogu badalo hab kaamil ah.
• arrimaha guud ee diinta ayaa waxaa sidoo kale la waxtarka weyn ka qabtaan.
Files wadada weyn
Gobolka dib u eegista user The "Barnaamijku waa mid ka mid ah fahan ahaan jeer oo dhan taas oo ka dhigi lahaa geeddi-socodka ah ee diinta guud ahaan mid aad u fudud in ay hirgeliyaan oo waafaqsan tilmaamaha user".
4. DVD cirib
Network cirib DVD
• Barnaamijku wuxuu aad u fududahay in la isticmaalo iyo update si qaababka ugu dambeeyay waxaa la riyaaqay.
• Waxa ay yaraynaysaa in isticmaalka processor khayraadka nidaamka kordhiyo jidaynayey weyn oo ay ku nasato.
Websites ayaa jeedaa oo ammaanaan software ah u qora "Barnaamijkan wuxuu ku salaysan yahay shugri user oo tayo leh si loo bixiyo natiijada in ay yihiin had iyo jeer la filayo in ay wadaha.
• Wixii OS Mac barnaamijkan waa boon ku siinaya dheeraad ah oo dhan isticmaala.
• khibrad guud oo waafaqsan shuruudaha user si waayo aragnimo ah aan xuduud lahayn jiro si ay u taageeraan nidaamka.
DADKA KALE MusicXML
Bogga internetka mar kale ammaanay barnaamijka iyo qoray "An maktabadda music fiican iyo ciyaaryahan in badasha hab super si degdeg ah fulinta shuruudaha oo dhan".
1. badalo Files
• Cabbirka file ilaa 150 MB waxaa lagu taageeray fudayd si diinta file waaweyn ma aha arrin.
• Converter waa fududahay in la isticmaalo iyo shaqeeyaan sida hage user faahfaahsan jiro.
Converter ayaa online waxaa lagu ammaanay oo goobta ayaa sheegay in "Barnaamijku waa fududahay in la isticmaalo iyo ka dhigaysa nidaamka si degdeg ah, oo dhan waxaa aad u sahlan in ay isticmaalaan iyo dadka isticmaala laylis sidoo kale faaiidaysan karaan buuxa waa xagga sare".
2. Free file badalo
File diinta Free
• style horumarka ee barnaamijka waa weyn yahay oo waxay u horseeddaa isticmaalka fudud oo waa la jaan qaada dhamaan OS.
• diinta file Multiple waqti isku mid ah waa muujinta ah oo uu soo gundhig gudahood barnaamijka.
MPEG 4- MPEG-2
Dib u eegid ku xusan in "user wuxu dhamaystiran website xal marka ay timaado soo gudbin diinta. Geedi socodka ma aha oo kaliya state of tahay, laakiin sidoo kale awood u tahay in la raaco ".
3. Media Beddelaan
Ururka badalo Media
• Goobta waa u fududahay in ay ku shaqeeyaan iyo qaababka ay si fiican u qeexay
• maaraynta ee website-ka waa u fududahay si hawlaha qaab beddelidda marna soo dhibtay.
Top toban dib u eegista
Fariinta guud dhigayaa in "website ayaa hawlaha qaab beddelidda sahlan tahay in la raaco iyo fulintiisa sidoo kale waa mid aad u fudud. Thanks to ku dhiirigelinayaan in uu.
4. Waxaad ku Beddelaan
Waxaad u Beddelaan
• Barnaamijka ayaa waxaa lagu qeexaa hab cad oo user
• Bogga internetka ee waa la cusboonaysiiyaa si loo daboolo baahida user
Website waxa uu dhigayaa in Converter la horumariyo si loo xaqiijiyo nabadda ee maskaxda oo aan arin kasta oo waayo-aragnimo weyn.
• Waa website-ka ugu fudud in ay isticmaalaan marka ay timaado liiskan
• dayactirka ee goobta waa mid aad u xirfad leh oo sidaas daraaddeed taabato waa ku weyn yahay.
Website waxay tixgelinaysaa ZamZar sida doorashada OK u diinta file ah, waxa kale oo uu dhigayaa in qaab beddelidda weligii sida ugu fudud ee waxa ay ahayd iyada oo Zamzar.
Ka dib waa 5 sare codsiga android in u adeegi doonaa ujeedada isticmaalayaasha:
1. MP3 video Converter
• Codsiga iyo interface guud caawisaa user iyada oo loo marayo nidaamka.
• sirdoonka guud ee app si fudud waa mid ka mid ah qaababka ugu weyn.
• Codsiga waa fududahay in la isticmaalo iyo horumarinta waa mid aad u fudud ku rakiban.
• The soo noqnoqda updates waxaa mid ka mid ah barnaamijyadooda ugu fiicnaa oo kale ka maqan sameeyo.
Converter 3. Media
Ciyaaryahanka V Ant
• interface Waa wax fudud oo soo jiidasho leh si ay u isticmaalaan sameynta hawlaha qaab beddelidda sahlan tahay in la raaco.
• shaqeynta guud dhaafa dadka kale si keeneysa in uu si fiican u yaqaan ah qaabkeeda.
Converter 4. Baarlamaanka 3 Media
• Codsiga taageertaa tiro balaadhan oo ah qaabab sidaas daraaddeed waxaa loo isticmaali karo in aan arin kasta.
• shaqeynayaan waxaa la socotid sirdoonka macmal ah oo baadheen content ku gaar ah.
5. Video in MP3
• App Tani waa mid aad u xirfad leh marka ay timaado swiftness
• interface guud waa mid aad u caqli badan oo gui ku salaysan.
> Resource > Top List > Top 20 free mp3 video converters